Namuhla sizozama uyosebenzelana nani ngombuzo: "Uma" Mozilla "tupit yini okufanele uyenze?" Kunezinto ezimbalwa yezizathu. Izinketho esebenzelana 'glitches "zahlukahlukene ngempela. Ngakho ake ngokushesha zama ukuqonda le ndaba ebucayi.
owawuholela kwelinye ikamelo elincane
Ake uqale nge engalimazi iningi izizathu. Uma uzindla mbuzo: "Lapho" Mozilla "? Tupit ukuthi yenzeni", Hlola kangakanani khulula isikhala onayo kwikhompiyutha yakho. Mhlawumbe lokhu kuziphatha olungisiswayo yokuntuleka isikhala?
Into wukuthi isiphequluli lapho esebenza amafayela ukwaziswa okukuyi-Internet ngaso sonke isikhathi usebenzisa isikhala kukhompyutha yakho. Yebo, futhi ishiya imibhalo yesikhashana. Uma buff movie kweqiniso, ngisho ama-movie progruzhat World Wide Web, akumangalisi ukuthi ngokuyisimangaliso "wanyamalala" gigabytes.
Ukuze siphendule lo mbuzo: "Mozilla" tupit - yini okumele uyenze, "zama ikhompyutha yakho ngokuphelele le njongo ngeke asondele Ccleaner Umbuso Kuyinto olukwazi imizuzwana embalwa ukukhulula eningi isikhala manje, uma isikhala kubuyiselwa, ukusebenzisa isiphequluli akusebenzi ....? Khona-ke ake sibone ukuthi yini enye ongayenza.
Plugin / izandiso
Ake sibheke elinye iphuzu, elikwaziyo ukukuchazela umbuzo: "? Tupit zalokho okufanele ukwenze ukuze ubuyisele umsebenzi" "Uma" Mozilla Sikhuluma ezihlukahlukene izijobelelo nezandiso abasebenzisi abathanda ukulanda uhlelo lwakho.
Ngakho, isiphequluli - sekuyinto kuyingxenye ebalulekile computer yesimanje. Ngaphandle kwayo (futhi ngaphandle Internet) akukwazi umsebenzisi. Ngakho, wonke umuntu ofuna ukwenza kusiphequluli sakho eyinkimbinkimbi kakhulu futhi "cool". I-World Wide Web, ungathola ezihlukahlukene free futhi wakhokha add-on, izijobelelo kanye nezandiso. Nokho, kunemingcele. Ngezinye izikhathi ezithile isiphequluli sakho uzoqala nje "wehluleka" uma uyifake ku izici ezintsha ezingasho.
Uma tupit "Mozilla", bese uzama ukuqeda akufunwa futhi akudingekile izijobelelo. Iya "Phatha okuphelelisa" kusiphequluli sakho, bese zisindise kulokho empeleni akudingekile ngakho. Bheka ku "izandiso" futhi "ama-plugin". Ngemva kwalokho, uqale kabusha isiphequluli kwanele. Umsebenzi akubi ngcono? Khona-ke, sizoqhubeka ukucabanga uma tupit "Muff" yini okufanele uyenze. Izimo miningi.
Enye indlela encane ukukusiza kancane ukuthuthukisa umsebenzi wesiphequluli - it is ekuqambeni kabusha ifolda yayo. Ukuze ukuxazulula inkinga yethu yamanje, uzodinga "ethula" inani lezinqubo ezisebenzayo nalapho esebenza kukhompyutha. Kodwa ungakwenza kanjani na?
Uma ucabanga ngokucophelela, bese uvula ikhasi kusiphequluli, kujwayele ukuthatha okuningi amandla CPU. Ngakho, kumelwe ngandlela-thile unqobe lo poser. Ukuze wenze lokhu, hamba uye izakhiwo izinqamuleli "Mozily". Chofoza inkinobho yegundane kwesokudla, bese ukhetha i-Stitch oyifunayo. Ukulungele? Khona-ke sibheke "injongo". Skrolela kwaze kwaba sekupheleni. Ngemva kubakaki avaliwe bhala "/ Prefetch" bese ugcine izinguquko. Manje uma wena uqalise isiphequluli, lonke ulwazi zizobekwa kule daddy. Lokhu kuzosiza umsebenzi kancane.
1000 1 usuku
Nokho, uma unenkinga futhi "Mozilla Firefoh" tupit, kuba isikhathi ukuba sizindle esingakanani edlule obukade engakathenjiswa umshado ekunakekeleni uhlelo lakho lokusebenza. Ngempela, ngezinye izikhathi kuba ngempela into ebaluleke for ukusebenza bushelelezi futhi efanele kwezicelo.
Ngakho masizame ukucabanga ukuthi zingasisiza. Okokuqala, ake ukubabulala izinhlelo ubudala futhi okungadingekile kanye imidlalo. Lokhu Kusiza ekudambiseni yesistimu yokusebenza. Ngaphandle kwalokho, kwakungeke ubuhlungu ukwenza kanye disk defragmentation. Le sevisi e "Izesekeli" - "Amathuluzi esistimu" inkinobho "Qala". Le nqubo ingathatha isikhathi eside impela. Ikakhulukazi uma unquma usisebenzisa okokuqala eminyakeni eminingana umsebenzi ngaleso computer. Thatha isikhathi sakho futhi uqale. Uma deal usuphothuliwe, kabusha ikhompyutha yakho. Zama ukusebenza kusiphequluli. Siza? Hhayi ngempela? Khona-ke ase sibone kutsi kungani ngaphezulu tupit isiphequluli "Mozilla Firefoh".
Manje ingxoxo yethu kancane zizoshintsha isiqondiso sayo. Into wukuthi uma ucabanga, kungani tupit "Mozilla Firefoh", futhi izinyathelo zangaphambilini ziye zasiza kungenjalo, khona-ke kungenzeka une-virus kukhompyutha izimbungulu. Ngakho manje sizoqala nawe ukuba baqonde indlela "xosha" kubo kusuka kusistimu yokusebenza.
Ngokwezibalo, okungukuthi computer amagciwane imithombo eyinhloko nezinkinga isicelo. Ikakhulukazi nge isiphequluli. Ngokwesibonelo, iThrojani angalihlambalaza kwikhompyutha yakho noma yiliphi ifayela ezinonya oluvimbela "Mozily" ngokuvamile. Futhi kwezinye iziphequluli, futhi. Hhayi ukhetho best.
izinto Okubi nakakhulu lapho uma izama ukuxhuma kwi-Inthanethi ekhasini lasekhaya esikhundleni abanye "Abracadabra," kodwa kusekhona kulo lonke ukukhangisa amabhanela. Lena ugaxekile. Isikhathi esining impela, isifo ezifana uyakwazi ukuntshontsha password akho kanye amagama yomsebenzisi osekuphele noma afakwe lesiphequluli. Izimo zethu zihluke kakhulu yingozi futhi singathandeki. Ngakho ake sibone ukuthi singakwenza kanjani ukuphendula umbuzo: "Uma tupit" Muff ", indlela yokulungisa?", Uma isihloko ophakamayo izinsolo ngezifo.
Ngakho, into yokuqala okudingeka uyenze - Yebo, ukuskena ikhompyutha yakho usebenzisa i-software yakho unqulo wesi arab kuphela. Ngezinye izikhathi kuyasiza uma lesi sinyathelo akuyona ukuqeda ukutheleleka ke okungenani ukwenza kube lula ukusebenza isiphequluli.
Ukuze umqondo ukuba uphumelele, udinga ukuthola Antivirus ezinhle. Dr.Web Abaningana impela efanelekayo. Alwa ne ezihlukahlukene yokusesha ogaxekile nezinye ukutheleleka. Uma isofthiwe ye-antivirus ungathandi ngasizathu simbe, ungasebenzisa Nod32 noma "Kaspersky". Ngokuvamile, uma got Antivirus ke ukuqala ukuskena. Uzothola kuphela ilingane isheke ezijulile.
Manje kufanele ulinde isikhashana. Kuleli qophelo, akukuhle ukusebenza kukhompyutha ngokuthi "Mozilla Firefoh" tupit kakhulu, kanye nezinye izinhlelo zokusebenza. Ukuskena kuphelile? Khona-ke nje okwelapha zonke ukuthi kungenzeka. Yini akwelapheki - ukususa. Qala kabusha i-computer futhi ubone ukuthi yabasiza yini. Hhayi ngempela? Khona-ke kufanele qinani idolo. Kusese trump amakhadi ambalwa ephaketheni lakhe. Ake ukubazi nabo.
Uma ucabanga, kungani "Mozilla" tupit, kufanele abheke ebhukwini yekhompyutha yakho. Le sevisi ikusiza ukuba uthole futhi asuse efihliwe kusuka amafolda Uhlelo unqulo wesi arab kanye namafayela. Ngakho-ke ukuthuthela ezinhle kakhulu. Ikakhulukazi uma ubhekene ugaxekile.
Ukuze singene ebhukwini, cindezela Win R. Manje ukusebenzisa "regedit". Ukulungele? Linda kancane ngenkathi progruz iwindi. Manje bheka ngokucophelela ukuthi yini eyenzeka. Ohlangothini lwesobunxele kukhona amafolda anamagama eside futhi kuyindida. Kuzo senza ukuthi bebodwa ezingekho eziwusizo. Kunalokho, kufanele uvakashele "Hlela" futhi "Ukucinga". In the line Vula ukubhala igama igciwane noma ugaxekile, ukuthi ukhathazekile, bese uqale test.
Lapho loluhlelo seluphelile, ukubheka umphumela. Okuthile Kuye kwatholakala? Khona-ke ukhululeke uchofoze inkinobho yegundane kwesokudla emigqeni ngamunye ngamunye, bese ukhetha "Susa". Lapho icala seliphelile, zama egijima isiphequluli. Noma kunjalo, kukhona ukwehluleka? Khona-ke ake ukubhekana umbuzo ukuthi, uma "Mozilla" tupit yini okufanele uyenze ngokulandelayo.
Sebenza nge amalebula
Esinye isinyathelo ezithakazelisa kakhulu futhi elula, kodwa akukho esingaphansi ngempumelelo kunalena eyedlule - it is ukusebenza amalebula iziphequluli zakho. Uma wazi ukuthi yini okufanele uyenze, kungaba nje okumbalwa ukuqeda ikhasi lasekhaya engadingeki nogaxekile. Ngakho masizame ukuthola ukuthi kuzodingeka.
Uma ucabanga, kungani "Mozilla" tupit, kodwa namanje abazi kanjani ukukulungisa, ukubheka izakhiwo izinqamuleli zohlelo. Ukuze wenze lokhu, chofoza uphawu, qhafaza kwesokudla, bese ukhetha i-Stitch oyifunayo.
It kuzovula iwindi encane phambi kwakho. It banake "into". Skrola ke kuze kube sekupheleni futhi ubone lokho elikushoyo. Uma emva ifayela fifefox.exe osesiphawulweni ahlukene into ebhaliwe (noma igama iwebhusayithi igciwane), nje ukususa le yombhalo oqoshiwe. Straight izingcaphuno. Manje ukulondoloza izinguquko futhi ubone ukuthi uthola. Qala kabusha isiphequluli sakho. Siza? Ayikho? Khona-ke uzame enye indlela ukuthi ngezinye izikhathi kuyasiza ukubhekana kangcono nale nkinga.
Hhayi-ke, uma wonke ongakhetha ziye wazama, kodwa akukho okuhle laphaya namanje akukho ke usele nge izindlela eziningi. Yini lokukhetha - unquma. Sisanda ukutshela nendlela yokuthatha isinyathelo.
Ngakho, le simo sokuqala - ukwenza buyisela emuva kohlelo ngalolo suku, ngisho nalapho isebenza kahle wena "Mozilla". Lokhu kuzodinga ekuhambeni ukuba "Buyisela Ithuluzi", bese ukhetha usuku oyifunayo bese ulinda. Nokho, uma i-computer une virus eyingozi, pullback akunakwenzeka ukuba basize.
Indlela yesibili - iwukuba faka isiphequluli. Yebo, kufanele umhlatshelo amabhukhimakhi akho kanye nolwazi, kodwa ngezinye izikhathi yilokho kuyasiza. Ngakho, download kwikhompyutha yakho sokusabalalisa entsha "Mozily", ukusula ubudala, futhi yini ukulanda, ukufaka. Mhlawumbe lokhu kuzosiza.
Enye - konke ukushintsha isiphequluli sakho. Amanye amagciwane futhi uhlelo izingozi ngokuvamile kungabangela ukungakwazi ukusebenzisa isicelo esithile. Manje eziningi iziphequluli cishe izakhamuzi zaseBosnia zifana kusuka komunye nomunye. Ngakho uzinqumela iyiphi indlela oyikhethayo. Manje ngoba sewuyazi ukuthi yini okumele uyenze uma you ngokuzuma ibuthuntu "Mozilla".
Iphutha ukuvula Igama-yefayela: Izimbangela, Ikhambi
Njengoba ayezalelwe Mexico - Colorado amazambane bhungane ... kanjani wanqoba Europe?
Indlela ukhule ube crystal futhi unike ingane yakho ajabule?
I-TV: ukulinganiswa kwekhwalithi. Isilinganiso sama-TV aphezulu e-LCD, ama-smart TV
Impindamqondo izincwadi ngokwengqondo: Izibonelo
Ephatha Lee Art Isikhathi?
Ukuqaphela Dormition Fast, kubalulekile ukwazi ukuthi ngokudla
Ukuhlanganisa for zokudlala zezingane: izinhlobo kanye nezici